အွန်လိုင်းကျောက်မျက်ရတနာ: ၇၉ Premium ကျောက်မျက်ရတနာကိုကြည့်ပါ
ကျောက်မျက်ရတနာအွန်လိုင်း ကျောက်မျက်ရတနာလက်စွပ်, နားကပ် & လည်ဆွဲ
ပတ္တမြား Solitaire လက်စွပ်
ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 219 ရောင်းဈေး € 139
ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 259 ရောင်းဈေး € 169
မြ Cut သံမြည်သံ
ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 249 ရောင်းဈေး € 159
မြ Cut Emerald နားကပ်
ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 299 ရောင်းဈေး € 189
ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 199 ရောင်းဈေး € 119
Citrine ကျောက်စာ Ring ကို
ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 239 ရောင်းဈေး € 149
Sky Blue Topaz လက်စွပ်
မြ Cut အပြာရောင် Topaz လက်စွပ်
Sky Blue Topaz နားကပ်
ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 269 ရောင်းဈေး € 179
မြ Solitaire လက်စွပ်
အပြာရောင် Topaz လုံးနားကပ်
မြ Long Drop ပုတီး
Topaz ကျောက်စာ Ring ကို
ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 199 ရောင်းဈေး € 149
ထိပ်တန်းအဆင့်ပုံဆောင်စိန် Round Brilliant နားကပ်
ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 209 ရောင်းဈေး € 139
ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 249 ရောင်းဈေး € 169
ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 209 ရောင်းဈေး € 129
Gemstone Jewellery Online - ကျောက်မျက်ရတနာ ၇ မျိုးပါသောကျောက်မျက်ရတနာလက်စွပ်၊ နားကပ်နှင့်လည်ဆွဲ
သမိုင်းတွင်လူကြိုက်အများဆုံးကျောက်မျက်လေးခုမှာစိန်၊ မြ၊ ရူဘီနှင့် Sapphire တို့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာများရှိသည့်အမျိုးသမီးများအတွက်လှပသောလက်ဝတ်ရတနာများကိုပေးသည်။ ကျောက်မျက်ရတနာပုလဲ၊ Topaz နှင့် Citrine နှင့်လက် ၀ တ်ရတနာများကိုလည်းပေးသည်။ ကျောက်မျက်ရတနာအမျိုးမျိုးကိုအရောင်အမျိုးမျိုး၊ ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ Pure Gems တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လှပသောလက်ဝတ်ရတနာများကိုကျောက်မျက်ရတနာများနှင့်ပြုလုပ်ပေးသည် ကျောက်မျက်ရတနာလက်စွပ် နှင့် ကျောက်မျက်ရတနာချိတ်ဆက်လက်စွပ် မျိုးစုံကျောက်မျက်ရတနာနှင့်အတူဗဟိုကျောက်များနှင့်ကွင်းနှင့်အတူ။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုအသုံးအများဆုံးအရွယ်အစားအတွက်ဆက်ကပ်။
လှပသောရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည် ကျောက်မျက်ပုတီး ထိုကဲ့သို့သောတောက်ပသောဖြတ်, မြ, ဖြတ်သစ်တော်သီးဖြတ်, ကူရှင်ဖြတ်, မင်းသမီးဖြတ်နှင့်နှလုံးဖြတ်အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောဖြတ်တောက်မှုနှင့်ပုံစံများအတွက်ရှည်လျားသောကျောက်မျက်ပုတီးနှင့်လုံးပုတီးအဖြစ်။ ထိုအခါကျွန်ုပ်တို့သည်အံ့သြဖွယ်ကိုဆက်ကပ် ကျောက်မျက်ရတနာ လည်းခေါ် ကျောက်မျက် Pendants အားလုံးသောပုလဲခုနစ်ဆယ်ငါးပုလဲနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ဇိမ်ခံစစ်မှန်သောပုလဲလည်ဆွဲမှလွဲ။ ဒဏ်ငွေဟာအလွန်ကောင်းသောငွေကွင်းဆက်နှင့်အတူပါရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပုလဲနှင့်အတူထူးခြားသည့်ကျောက်မျက်လက်ကောက်အနည်းငယ်ရှိသည်။ ဤရွေ့ကားအမျိုးသမီးများအတွက်အကျော်ကြားဆုံးကျောက်မျက်ရတနာအမျိုးအစားများဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့်သောကျောက်မျက်ရတနာများကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောက်မျက်ရတနာများစွာကိုကမ်းလှမ်းသည်။
ပတ္တမြားနှင့် Sapphire - Real Lab မှအစိမ်းရောင်နှင့်အပြာရောင်ကျောက်မျက်ရတနာများထုတ်လုပ်သည်
ရောင်စုံကျောက်မျက်ရတနာများအများဆုံးရှာဖွေသည့်တစ်ခုမှာ Red Ruby နှင့် Blue Sapphire တို့ဖြစ်သည်။ Pure Gems တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရူပဗေဒနှင့်သဘာဝ Sapphires များနှင့်တူညီသော်လည်းရူပီးပတ္တမြားနှင့်စစ်မှန်သော Sapphires များကိုထုတ်လုပ်သော်လည်းစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု၊ အရောင်၊ သူတို့ကိုတူညီသောသဘာဝဒြပ်စင်အလူမီနီယမ်အောက်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြု၍ ဖန်တီးထားသည်။Al2O3) နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် 2000 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အပူ။ စင်ကြယ်သောကျောက်မျက်ရတနာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တကယ့်လှပသောအနီရောင်ကဲ့သို့သောကြီးထွားလာသောကျောက်မျက်ရတနာများနှင့်အတူကျောက်မျက်ရတနာများကိုရောင်းချသည် ပတ္တမြားရတနာ နှင့်အစစ်အမှန်အပြာ နီလာကျောက်မျက်ရတနာ ဆွစ်ဇလန်မှ Sapphire နှင့်အတူ။
Simulated Diamond & Emerald - ထိပ်တန်းအဆင့်အရည်အသွေးမြင့်ကျောက်မျက်များ
ပွင့်လင်းမြင်သာသောအဖြူရောင်ကျောက်မျက်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အခက်ခဲဆုံးနှင့်အကျော်ကြားဆုံးသောကျောက်မျက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိန်ပွင့်များ သဘာဝစိန်များ၏အရည်အသွေးထက်သာလွန်သည် စိန်များအတွက်4C ရဲ့အားလုံးအပေါ်; ဖြတ်, အရောင်, ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်းနှင့်ကာရက်။ အလားတူရေတွက်သည် တူရကီမြ အရာသာ။ ကောင်း၏အရည်အသွေးလည်းရှိပါတယ် သဘာဝမြထက်ထက်။ ယူရို ၅၀၀၀ မှယူရို ၂၀၀၀၀ သို့အစား၊ သဘာ ၀ စိန်တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုမှသဘာဝရတနာပစ္စည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုအတွက်ပေးဆပ်မည့်အစားကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၀၀ မှယူရို ၂၅၀ ကြားသာအရည်အသွေးမြင့်မားသောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသော Pure Gems ကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည်သဘာဝမစုံလင်မှု၊ ပconflictိပက္ခနှင့်မည်သည့်အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုမှကင်းလွတ်သည့်စင်ကြယ်သောကျောက်မျက်များဖြစ်သည်။ ဤထိပ်တန်းအဆင့်တူသောကျောက်မျက်ရတနာများကိုကျွန်ုပ်တို့ကြားတွင်တွေ့နိုင်သည် တူအောင်ဖန်တီးစိန်ရတနာ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ တူရကီမြ Jewerly.
Topaz, Citrine & ပုလဲ - ပictိပက္ခကင်းသောသဘာဝရတနာရတနာ
သဘာဝဥဿဖရား ၎င်းသည်ဘရာဇီးလ်မှလှပသောကောင်းကင်ပြာရင့်ရောင်တူးဖော်သောကျောက်မျက်ရတနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သူတို့၏ကောင်းကင်ပြာအရောင်ကိုရရှိရန်အတွက်ကုသသောအရောင်များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသောအခြားသဘာဝကျောက်မျက်ရတနာသည်ရွှေဝါရောင်ဖြစ်သည် သဘာ Citrine အရာကိုလည်းဘရာဇီးကနေတူးဖော်ကျောက်မျက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ citrine ကျောက်မျက်ရတနာအရောင်ကုသကြသည်မဟုတ်။ ကျွန်ုပ်တို့လည်းအသုံးပြုသည် စစ်မှန်သောပုလဲ ယဉ်ကျေးမှုရေချိုပုလဲဖြစ်ခြင်း။ ၄ င်းတို့သည်သဘာဝအဖြူနှင့်အရောင်တောက်ပသည့်တောက်ပမှုရှိသော ၁၀၀% စင်ကြယ်သောပုလဲများဖြစ်သည်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Read ဘ‌‌လော့ခ် ကျောက်မျက်ရတနာနှင့်စိန်လက်ဝတ်ရတနာများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်။ ငါတို့ဖတ်ပါ Solitaire စိန်လက်စွပ် ငါတို့အတွက်လမ်းပြ စျေးပေါသောစေ့စပ်လက်စွပ် လမ်းညွှန်, အရည်အသွေး, ခေတ်ရေစီးကြောင်း & ဒီဇိုင်းများအကြောင်းကိုလေ့လာပါ 1 ကာရက်စေ့စပ်လက်စွပ်, အ နီလာနှင့်စိန်လက်စွပ် သို့မဟုတ်သင်သိရန်လိုအပ်သမျှကိုရှာဖွေပါ တူအောင်စိန်လက်စွပ်။ အကြောင်းကိုလည်းလေ့လာပါ စိန်နှင့်လက်ဝတ်ရတနာသန့်ရှင်းရေး အသက်ရှင်လျက်ကြောင်း sparkle ကိုစောင့်ရှောက်ရန်။ ငါတို့ရှာဖွေပါ ပုလဲဆွဲကြိုးလည်ဆွဲ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ အမျိုးသမီးများနေ့ပုလဲနားကပ် အမျိုးအစားများ, ဒီဇိုင်းများနှင့်စျေးဝယ်အကွံဉာဏျနှင့်အကြောင်းကိုမေ့လျော့မ ပုလဲလည်ဆွဲစျေး။ နောက်ဆုံးသင့်ရဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိ ကျောက်မျက်နှင့်အတူလည်ဆွဲ မည်သည့်လသည်မည်သည့်မွေးဖွားခြင်းကျောက်တိုင်နှင့်သက်ဆိုင်ကြောင်းနှင့်ရှာဖွေရန် ၅ အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေခြင်းအားဖြင့် Silver ကျောက်မျက်ရတနာလက်စွပ် နှင့်လက်ဝတ်ရတနာ။
description: ဤအထူးပတ္တမြားသည် ၂.၂ ကာက္တာ Cushion Cut Ruby ကိုဗဟိုကျောက်မျက်ရတနာအဖြစ်သိမ်းဆည်းထားသည်။ Gem ကို ၉၂.၅% Pure Silver လက်စွပ်တွင်တပ်ဆင်ထားပြီး Diamond ၏နံဘေး ၃၈ လုံးပါ ၀ င်သည့်အပြင်နေ့စဉ်နှင့်အမျှသင့်ကိုအထူးခံစားစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
လက်စွပ် Size: သင်သည်ဤလက်စွပ်ကို ၅၀၊ ၅၂၊ ၅၆ ဖြင့်ဝယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်လက်စွပ်၏အ ၀ န်းဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်သင့်လက်ချောင်းတစ်ဝိုက်မီလီမီတာအရှည်ရှိသည်။ မင်းရဲ့လက်စွပ်ကိုတိုင်းတာရေးကြိုးနဲ့တိုင်းတာတဲ့တုတ်နဲ့ကြိုးသေးလေးတစ်ခုနဲ့အလွယ်တကူတိုင်းတာနိုင်တယ်။ သင်၏လက်ချောင်းတစ်ဝိုက်မီလီမီတာအရေအတွက်သည်သင်လိုအပ်သောလက်စွပ်အရွယ်နှင့်ကိုက်ညီလိမ့်မည်။ မင်းရဲ့လက်စွပ်အရွယ်အစားကိုအခြားနိုင်ငံများမှာဘာလဲ Ring Size Converter Chart ဖြင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
'Buy Now Now' ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီရယူရန် ကြော့ Topaz Ring ကို။ ဤကျောက်မျက်ရတနာ၊ ဖြန့်ဝေမှု၊ ပြန်ပို့ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုနှင့်သုံးစွဲသူထောက်ခံစာများအတွက်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက်အောက်ပါ tabs များကိုနှိပ်ပါ။ သင်မှာယူသည့်လက်စွပ်သည်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မှုမရှိခဲ့ပါကရက် ၃၀ အတွင်းဥရောပ၌အခမဲ့လဲလှယ်နိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကြည့်ရှုပါ ပြန်အမ်းငွေပေါ်လစီ.
FR, အိုင်တီ, CH
description: အနီရောင်ပတ္တမြားဆွဲသည်မင်းသမီးတစ်ပါးကဲ့သို့ခံစားရစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ မင်းသမီးဒိုင်ယာနာနှင့်မင်းသမီးကိတ်ကဲ့သို့သောဗြိတိသျှမင်းကြီး၏လက်ဝတ်ရတနာများကလှုံ့ဆော်သည်။ Vibrant Red 2.6ct ဘဲဥပုံဖြတ်ပတ္တမြားနှင့်စိန် Simulants ၁၄ လုံးကို ၉၂.၅% စင်ကြယ်သောငွေရောင်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီး ၄၅ စင်တီမီတာကောင်းသောငွေကွင်းဆက်ပါရှိသည်။
'Buy Now Now' ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီ Elegant ရရန် ပတ္တမြားလည်ဆွဲ။ ဤကျောက်မျက်ရတနာ၊ ဖြန့်ဝေမှု၊ ပြန်ပို့ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုနှင့်သုံးစွဲသူထောက်ခံစာများအတွက်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက်အောက်ပါ tabs များကိုနှိပ်ပါ။
description: ဤကြည်ညိုဖွယ်ကောင်းသောအနီရောင်နားကြပ်နားကပ်တွင်နားကြားတစ်လုံးလျှင် ၁.၅၅ ကာရက်ရှိသောနှလုံးဖြတ်ပတ္တမြားကို Center Gemstone (စုစုပေါင်း ၃.၃ ကာရက်) အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်။ Red Ruby ကို 1.15% Pure Silver ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးနားကပ်တစ်ခုစီတွင် Diamond Simulants ၂၃ ခုနှင့်အလှဆင်ထားသည်။ နားကပ်များသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ခင်မင်မှု၏အမှတ်အသားဖြစ်သည်။
'Buy Now Now' ကိုနှိပ်ပါ။ ဤအရယူရန် ပတ္တမြားနားကပ်။ ဤကျောက်မျက်ရတနာ၊ ဖြန့်ဝေမှု၊ ပြန်ပို့ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုနှင့်သုံးစွဲသူထောက်ခံစာများအတွက်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက်အောက်ပါ tabs များကိုနှိပ်ပါ။
description: ဒီ Beaming Ruby စေ့စပ်လက်စွပ်သည်စင်တာကျောက်မျက်ရတနာအဖြစ် ၂.၇ ကာရက်ရှိ Pear Cut Ruby ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် Gem ကို ၉၂.၅% Pure Silver လက်စွပ်တွင်တပ်ဆင်ထားပြီးတစ်ဖက်စီတွင်ထားရှိသောစိန် ၂ လုံးပါ ၀ င်ပြီးသူမကိုနေ့စဉ်ခံစားမှုခံစားစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ယခု Ruby နှင့် Diamond Engagement Ring ကို ၀ ယ်ပါ။
ပFreeိပက္ခကင်းသော - ဤပတ္တမြားကျောက်မျက်သည်နည်းလမ်းတိုင်းတွင်သန့်ရှင်းသောကျောက်မျက်ဖြစ်သည်။ သူတို့၏စင်ကြယ်သောတောက်ပမှုနှင့် VVS ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုအပြင်သူတို့သည်လည်း ၁၀၀% ကိုယ်ကျင့်တရားစင်ကြယ်ကြသည်; ဤအမျိုးသမီးရတနာအပိုင်းအစရှိကျောက်မျက်ရတနာများသည် ၁၀၀% ပconflictိပက္ခကင်းသော၊ အတင်းအဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှု၊ ကလေးအလုပ်သမားမရသဖြင့်သဘာ ၀ အရင်းအမြစ်များကိုမကုန်ခမ်းနိုင်ပါ။
ရက် ၁၀၀ ပြန်အမ်း: ဤပတ္တမြားအကြောင်း၊ ပေးပို့ခြင်း၊ ပြန်ပို့ခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ဖောက်သည်ထောက်ခံစာများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကအောက်ပါ tabs များကိုနှိပ်ပါ။ သင်မှာထားသည့်လက်စွပ်သည်အံဝင်ခွင်ကျမဖြစ်လျှင်ရက် ၁၀၀ အတွင်းလဲလှယ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ပြန်ပို့နိုင်သည် (ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒ) ။ ဥရောပရှိဖောက်သည်များသည်အခမဲ့ပြန်ပို့ခြင်းလေယာဉ်တံဆိပ်ကိုရနိုင်သည်။ ယခုမှာယူပါနှင့်အခမဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသောင်တင်လက်ခံရရှိ!
description: ဤထူးခြားသော Emerald Simulant Ring သည်ကျော်ကြားသော Emerald Cut အသွင်သဏ္ဌာန်ဖြင့်ထွင်းထုထားသောကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ခုတည်းသော Emerald Simulant Ring ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ၀.၇ ကာတာအစိမ်းရောင်ဓာတ်ခွဲခန်းမှဖန်တီးထားသော Emerald Simulant ကိုရုရှားမှလှပသောပုံစံဖြင့်လက်စွပ်ထဲထည့်ထားသည်။ ၉၂.၅% Pure Silver လက်စွပ်သည်ခိုင်ခံ့ပြီးလှပသောဒီဇိုင်းရှိသည်။
'Buy Now Now' ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီရယူရန် simulated မြ Ring ကို။ ဤကျောက်မျက်ရတနာ၊ ဖြန့်ဝေမှု၊ ပြန်ပို့ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုနှင့်သုံးစွဲသူထောက်ခံစာများအတွက်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက်အောက်ပါ tabs များကိုနှိပ်ပါ။ သင်မှာယူသည့်လက်စွပ်သည်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မှုမရှိခဲ့ပါကရက် ၃၀ အတွင်းဥရောပ၌အခမဲ့လဲလှယ်နိုင်သည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကြည့်ရှုပါ ပြန်အမ်းငွေပေါ်လစီ.
description: ဤ Emerald Simulant Earrings သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အထင်ကြီးစရာအကောင်းဆုံးကျောက်မျက်ရတနာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏လှပသောအရည်အသွေးမြင့်မြ Emerald Simulants စုစုပေါင်း ၅.၄ ကာရက် (နားကပ်နှုန်း ၂.၇ ကာတာ) နှင့်အနုပညာအားဖြင့် ၉၂.၅% Fine Silver တွင်သတ်မှတ်ထားသော Brilliant Cut Diamond Simulants ၄၈ ခုဖြင့်ဆွဲဆောင်ထားသည်။ သင့်ကိုအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ဖြစ်စေသောဤမယုံနိုင်စရာနားကပ်များဖြင့်မည်သူ့ကိုမဆိုအထင်ကြီးစေလိမ့်မည်။
'Buy Now Now' ကိုနှိပ်ပါ။ ဤအရယူရန် မြကျောက်မျက်ရတနာနားကပ်။ ဤကျောက်မျက်ရတနာ၊ ဖြန့်ဝေမှု၊ ပြန်ပို့ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုနှင့်သုံးစွဲသူထောက်ခံစာများအတွက်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအတွက်အောက်ပါ tabs များကိုနှိပ်ပါ။
description: ဒီရီးရဲလ်ပုလဲလက်ကောက် ၂၄ ခုထက်ပိုသောရတနာပုလဲ ၂ လုံးကျော်ပါရှိသည် ၈-၉ မီလီမီတာအရွယ်ပုလဲတို့ကိုအလွန်ခိုင်ခံ့သောကြိုးဖြင့်ကိုင်ထားသည်။ ဤလှပသောပုလဲများ၏ဘဲဥပုံ၊ မြင့်မားသောတောက်ပမှုနှင့်ဆင်စွယ်ရောင်ဖြူရောင်အားလုံးသည်သဘာဝပင်။ ပုလဲလက်ကောက် Silver Connector သည်လက်ကောက်ကိုဖွင့်ရန်နှင့်ပိတ်ရန်လွယ်ကူစေသည်။
ဇိမ်ခံအမှတ်တံဆိပ်: ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရီးရဲလ်ပုလဲလက်ကောက်သည်ကျောက်မျက်ရတနာအမှတ်တံဆိပ် Pure Gems ၏ကျောက်မျက်ရတနာစုဆောင်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအရည်အသွေး၊ ဒီဇိုင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုတို့တွင်ထူးကဲသည်။ ဤအပိုင်းအစသည်ဖဲကြိုးထားသောအဖြူရောင်သစ်သားသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဇိမ်ခံလက်ဆောင်သေတ္တာထဲတွင်ထုပ်ထားသည်။
ဒီဇိုင်းကောင်း ဤလှပသောပုလဲလက်ကောက် Silver Jewelry Piece ကိုအဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်ဒီဇိုင်းပညာရှင်များမှဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီးအတွေ့အကြုံရင့်ကျောက်မျက်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အဖိုးတန်သတ္တုပန်းချီများမှထုထည်လုပ်ထားသည်။ လှပသောအဖြူရောင်ကောင်းသောငွေဖြူ ၉၂၅ ဟာအလွန်ကြည်လင်သန့်ရှင်းမှုကြောင့်ရွေးချယ်ထားသောအဖိုးတန်သတ္တုဖြစ်သည်။
ကျင့်ဝတ် 100% ဤပုလဲတိုင်းလမ်းအတွက်စင်ကြယ်သောကျောက်မျက်ပါ၏ အရောင်၊ တောက်ပမှုနှင့်မျက်နှာပြင်များအပြင်၎င်းတို့သည် ၁၀၀ ရာနှုန်းအရအရသန့်ရှင်းသည်။ ဤအမျိုးသမီးလက်ဝတ်ရတနာအပိုင်းအစမှပုလဲများသည် ၁၀၀% ပconflictိပက္ခများ၊ အတင်းအဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းမှုများ၊ ကလေးအလုပ်သမားများကင်းမဲ့ခြင်း၊
အခမဲ့ပို့ပေးသည်: ဤပုလဲ၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ပြန်ပို့ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုနှင့်ဖောက်သည်များ၏ထောက်ခံချက်များအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကအောက်ပါ tabs များကိုနှိပ်ပါ။ ယခုရရှိရန်ရီးရဲလ်ပုလဲလက်ကောက်ကိုမှာပါ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်ငွေပြန်အမ်းခြင်းအာမခံဖြင့်ရက် ၁၀၀ ပြန်လာသည့်ကာလ။ "ယခုဝယ်ယူပါ" ကိုနှိပ်ပါ။
description: ဤ Fine Citrine Stud Earrings တွင်အံ ၀ င်နှုန်းလျှင် ၀.၆ ကာရက်ရှိသောဘဲဥပုံဖြတ်အဝါရောင် Citrine (စုစုပေါင်း ၁.၂ ကာက္) ပါရှိသည်။ ၉၂.၅% Fine Silver တွင်သတ်မှတ်ထားသော Diamond Simulants ၁၄ ခုပါ ၀ င်သည်။ သူတို့၏ဘဲဥပုံဖြတ်ပိုင်းများသည်နားကပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကိုက်ညီစေသည် Citrine ကျောက်စာ Ring ကို နှင့် Citrine ဆွဲပြားလည်ဆွဲ.
ဇိမ်ခံအမှတ်တံဆိပ်: ဤသည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် Citrine နားကပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် အဝါရောင်ကျောက်မျက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရည်အသွေး၊ ဒီဇိုင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုတို့တွင်ထူးကဲသောလက်ဝတ်ရတနာအမှတ်တံဆိပ် Pure Gems မှလက်ဝတ်ရတနာများစုဆောင်းခြင်း၊ ဤအပိုင်းအစသည်ဖဲကြိုးထားသောအဖြူရောင်သစ်သားသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဇိမ်ခံလက်ဆောင်သေတ္တာထဲတွင်ထုပ်ထားသည်။
ရီးရဲလ် Citrine: ဤအဝါရောင်ကျောက်မျက်ရီးနားကပ်များသည်ဘရာဇီးမှသဘာဝတူးဖော်သည့် Citrine၊ သဘာဝ Citrine သည်သဘာဝတွင်ရှားပါးသောကြောင့်မကြာခဏတုပ။ အရောင်တောက်ပသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ရှိသောဤ Citrine သည်ဤထူးခြားသောအဝါရောင်ကျောက်မျက်ရတနာနားကပ်များကိုအထူးသီးသန့်ဖြစ်စေသောစစ်မှန်သောကုသမှုမရှိသောသဘာဝအစစ်အမှန် citrine ဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များအတွက်၊ အောက်ရှိ Citrine Gemstone Info tab ကိုနှိပ်ပါ။
ဒီဇိုင်းကောင်း ဤလှပသော Sterling Silver Citrine Earrings များကိုအဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်ဒီဇိုင်းပညာရှင်များမှဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီးအတွေ့အကြုံရင့်ကျောက်မျက်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အဖိုးတန်သတ္တုပန်းချီကားများမှထုထည်လုပ်ထားသည်။ လှပသောအဖြူရောင်အဖြူရောင်ကောင်းသော 925 sterling silver သည်၎င်း၏တောက်ပမှုနှင့်သန့်ရှင်းမှုကြောင့်ရွေးချယ်ထားသောအဖိုးတန်သတ္တုဖြစ်သည်။
ပFreeိပက္ခကင်းသော - ဤ Citrine ကျောက်မျက်ရတနာများသည်နည်းလမ်းတိုင်းတွင်သန့်ရှင်းသောကျောက်မျက်များ၊ သူတို့၏စင်ကြယ်သောတောက်ပမှုနှင့် VVS ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုအပြင်သူတို့သည်လည်း ၁၀၀% ကိုယ်ကျင့်တရားစင်ကြယ်ကြသည်; ဤအဝါရောင် Citrine နား၌ကျောက်မျက်ရတနာများသည် ၁၀၀% ပconflictိပက္ခကင်းသော၊ အတင်းအဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှု၊ ကလေးအလုပ်သမားမရသဖြင့်သဘာ ၀ အရင်းအမြစ်များကိုမကုန်ခမ်းနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏သဘာဝ citrine လုံးနားများကိုကြည်လင်သောသိစိတ်ဖြင့်ခံစားနိုင်သည်။
အခမဲ့ပို့ပေးသည်: ဒီဟာကိုမှာပါ ယနေ့ Citrine လုံးနားကပ်နှင့်အခမဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုလက်ခံရရှိ! Pure Gems တွင်သင်လွယ်ကူစွာစျေးဝယ်နိုင်သည်။ You သည်ငွေပြန်အမ်းခြင်းအာမခံဖြင့်ရက် ၁၀၀ အတွင်းသင်၏အမှာစာကိုပြန်လည်လဲလှယ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ပြန်ပေးနိုင်သည်။ Fသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောသတင်းအချက်အလက်သည်အောက်ပါ Delivery, Returns & Support tab ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီလှပသောအဝါရောင် Citrine နားကပ်ကိုရယူပါ။ 'Buy Now Now' ကိုနှိပ်ပါ။
description: ဤ Citrine Stone Ring သည်မင်းသမီး Diana နှင့်မင်းသမီးကိတ်ကဲ့သို့သောဗြိတိသျှမင်းသမီးများမှုတ်သွင်းသော Citrine နှင့် Diamond Ring ဖြစ်သည်။ သင့်အားမင်းသမီးအဖြစ်ခံစားစေလိမ့်မည်။ Captivating Citrine Ring သည်ဘရာဇီးမှအဝါရောင် ၁.၈ ကာရက်ရှိသော Oval Cut Natural Citrine နှင့် Simulator ၁၄ ခုပါဝင်သည်။ အဆိုပါ Sterling Silver Citrine လက်စွပ်ဒဏ်ငွေ 1.8% Pure Silver တီးဝိုင်းရှိခဲ့ပါတယ်။
ဇိမ်ခံအမှတ်တံဆိပ်: ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် Citrine လက်စွပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် အဝါရောင်ကျောက်မျက်ရတနာ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိအရည်အသွေး၊ ဒီဇိုင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကြောင့်လူသိများသောလက်ဝတ်ရတနာအမှတ်တံဆိပ် Pure Gems မှစုဆောင်းခြင်း။ Citrine နှင့် Diamond Ring Ring တို့ကိုအဖြူရောင်သစ်သားသစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဇိမ်ခံလက်ဆောင်သေတ္တာထဲတွင်ထုပ်ပိုးထားသည်။
ရီးရဲလ် Citrine: ဒီ Citrine Stone Ring သည်ကျောက်မျက်ရတနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဘရာဇီးနိုင်ငံမှသဘာဝတူးဖော်ရရှိသော Citrine၊ သဘာဝ Citrine သည်သဘာဝတွင်ရှားပါးသောကြောင့်မကြာခဏတုပ။ အရောင်များကိုကုသသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ရှိသော Citrine သည်ဤထူးခြားသောအဝါရောင်ကျောက်မျက်လက်စွပ်ကိုအထူးသီးသန့်ဖြစ်စေသောစစ်မှန်သောကုသမှုမရှိသောသဘာဝအစစ်အမှန် citrine ဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်များအတွက်၊ အောက်ရှိ Citrine Gemstone Info tab ကိုနှိပ်ပါ။
ဒီဇိုင်းကောင်း ဤလှပသော Sterling Silver Citrine Ring ကိုအဆင့်မြင့်ကျွမ်းကျင်ထိပ်တန်းဒီဇိုင်နာများကဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီးအတွေ့အကြုံရင့်ကျောက်မျက်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အဖိုးတန်သတ္တုပန်းချီများမှထုထည်လုပ်ထားသည်။ ၎င်းကို Citrine Engagement Ring အဖြစ်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ လှပသောအဖြူရောင်ကောင်းသောဒဏ်ငွေ 925 Sterling Silver သည်၎င်း၏တောက်ပမှုနှင့်သန့်ရှင်းမှုကြောင့်ရွေးချယ်ထားသောအဖိုးတန်သတ္တုဖြစ်သည်။
ပFreeိပက္ခကင်းသော - ဤကျောက်မျက်ရတနာများသည်နည်းလမ်းတိုင်းတွင်သန့်ရှင်းသောကျောက်မျက်များ၊ သူတို့၏စင်ကြယ်သောတောက်ပမှုနှင့် VVS ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုအပြင်သူတို့သည်လည်း ၁၀၀% ကိုယ်ကျင့်တရားစင်ကြယ်ကြသည်; ဤ Citrine နှင့် Diamond Ring ရှိကျောက်မျက်ရတနာများသည် ၁၀၀% ပconflictိပက္ခကင်းသော၊ အတင်းအဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှု၊ ကလေးအလုပ်သမားမရသဖြင့်သဘာ ၀ အရင်းအမြစ်များကိုမကုန်ခမ်းနိုင်ပါ။ သင်၏ကြည်လင်သောသြတ္တပ္ပစိတ်ဖြင့်သင်၏ citrine လက်စွပ်ကိုခံစားနိုင်သည်။
အခမဲ့ပို့ပေးသည်: ဒီမှာကြားပါ ယနေ့ Citrine လက်စွပ်နှင့်အခမဲ့ကမ္ဘာအနှံ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလက်ခံရရှိ! Pure Gems တွင်သင်လွယ်ကူစွာစျေးဝယ်နိုင်သည်။ သင်မှာယူသော Citrine Stone Ring သည်အဆင်မပြေပါကသို့မဟုတ်မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆိုသင်အပြည့်အဝငွေပြန်အမ်းပေးခြင်းနှင့်ရက်ပေါင်း ၁၀၀ အတွင်းငွေလဲလှယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်ပို့နိုင်သည်။ Fသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးပို့ပါကပေးပို့ခြင်း၊ ပြန်ပို့ခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ခြင်း tab ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီလှပတဲ့ Citrine နှင့် Diamond Ring ကိုလက်လွတ်မခံပါနဲ့။ 'Buy Now Now' ကိုနှိပ်ပါ။